Ambodifilao : tratra ilay ramatoa milaza fa mahatafiditra mpiasa ao amin’ny Men | NewsMada
Ambodifilao : tratra ilay ramatoa milaza fa mahatafiditra mpiasa ao amin’ny Men
Par Taratra sur 07/01/2016
Saron’ny polisin’ny Sureté Urbaine de Tananarive (Sut) teny Ambodifilao, ny alatsinainy teo ny renim-pianakaviana voarohirohy ho malaza ratsy amin’ny fisolokiana avo lenta. Araka ny fanazavan’ny polisy, milaza ho mahatafiditra mpiasa hiasa ao amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (Men) eny Anosy ity renim-pianakaviana ity. Nisy olona fito tonga nametraka fitoriana tao amin’ny polisin’ny Sut, ny volana novambra 2015 lasa teo. Nilaza ireo olona nametraka fitarainana ireo fa ramatoa iray miasa ao amin’ny Men Anosy no nilaza tamin’izy ireo fa mahatafiditra mpiasa hiasa ao amin’ity minisitera ity. Nakany vola mitentina 1 400 000 Ar isan’olona izy ireo ary nasainy manomana antontan-taratasy maromaro, toy ny dika mitovin’ny kara-panondrom-pirenena, diplaoma Maîtrise ary fanamarinam-ponenana. Rehefa nohamarinina anefa, tsy mpiasa ao amin’ny Men ilay ramatoa mpisoloky sady tsy misy akory ny asa nampanantenainy ho an’ireo olona nosolokiany ireo.
Nanao ny fikarohana avy hatrany ny polisy taorian’izay. Tsikaritry ny iray amin’ireo voasoloky teny Ambodifilao izy. Tsy afa-nihetsika intsony izy ka noraisim-potsiny taorian’izay. Nilaza izy nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa maro ny efa voasolokiny, saingy ireo olona fito ireo no sahy nitory azy teny amin’ny polisy.
Tokony ho tonga saina, araka izany, ny tsirairay amin’ireny mpisoloky manerana ny tanàna ireny. Sarotra rahateo koa ny hahatafidirana ho mpiasam-panjakana amin’izao fotoana izao, hany ka marobe ireo voarebirebin’ny mpisoloky.